Personalities & Profil: Amy DeLouise | NAB Show News | 2020 NAB Show Media Partner sy mpamokatra ny NAB Show LIVE. News Engineering Engineering
Amy DeLouise (loharano: Joseph DiBlasi)
Amy DeLouise dia mpandahateny, mpanoratra, mpitantara tantara ary talen'ny famoronana. Vao haingana aho no nanana fotoana nitafatafa taminy ary niresaka momba ny asany mahavariana sy marobe, nanomboka tamin'ny voalohany. “Ny sakafo voalohany nataoko tamin'ity horonantsary biz ity dia niaraka tamin'ny orinasan'ny famokarana haino aman-jery kely iray tany Washington, DC Nanamboatra tambajotram-pahitalavitra adiny iray adiresy manokana ho an'ny tambajotram-pifandraisana iray aho, ary nanao ny lohateny hoe: Nanana seho farany iray izahay hitifirana ilay mpaka sary tamina fakantsary malaza, saingy mila soratana indray, ary raiki-tahotra ny rehetra. Voan'ny pnemonia ilay mpanoratra. Nijery ahy ny rehetra ary nilaza hoe 'tsy lehibe amin'ny teny anglisy ve ianao ao Yale? Ianao no manoratra azy. ' Ka izany no nahazoako ny mari-pankasitrahana fanoratana an-tsary voalohany. Vetivety dia nanomboka nanao asa mahaleo tena aho amin'ny maha-mpanoratra an-tsoratra ahy, saingy naka asa mpanampy betsaka aho handoavana ny faktiora, ao anatin'izany ny departemanta misy ny sarimihetsika sy dokambarotra marobe. Nianarako avy tamin'ny lafy tsara sasany tamin'ireo asa ireo - ny olona nahafantatra ny lojika sy ny fitaovana ilaina mba hisintonana endrika na tifitra manokana. Heveriko fa ny lesona avy amin'ireto gig ireto dia ny hoe tokony ho vonona ianao haka fotoana mety rehefa hiseho ny tenany, ary apetraho amin'ny asa mafy foana ny fanaovana majia eo amin'ny efijery. Ary koa, rehefa miasa mandritra ny 14 ora ianao, dia tena manampy amin'ny famahanana ny olona izany. ”
DeLouise dia heverina ho iray amin'ireo manam-pahaizana indrindra amin'ny indostrian'ny sarimihetsika momba ny sary arisiva sy ny fikarohana ara-tantara. Nanontany azy aho hoe ahoana no nahaliana azy tamin'io lafiny io filmmaking. "Tsy mba mpianatra nianatra tantara manokana manokana aho," hoy ny fanazavany, "fa avy eo dia nianatra taranja tantara momba ny zavakanto aho ary raiki-pitia. Nisy sary! Ka tena izany no nahitako fa mianatra maso aho. Mandrosoa haingana amin'ny iray amin'ireo asako voalohany amin'ny maha mpanampy amin'ny famokarana a Hollywood sarimihetsika, fikarohana momba ny lisitr'ireo sehatra izay toa tsy mitovy hevitra - fifaninanana ping pong any Sina, fanoherana ny ady any Vietnam any Washington DC, ilay karazana kiraro mihazakazaka vita amin'ny 1970. Io sarimihetsika kely io dia nanjary horonantsary nandresy tamin'ny Oscar Forrest Gump. Ny fahitana ny fikarohana nataoko — ary, mazava ho azy, ny an'ny olon-kafa — tonga teo amin'ny seho dia zava-niainana mahagaga ary nampiova ny asako. ”
Nandritra io vanim-potoanan'ny asany io no nahaliana an'i DeLouise ny hanao horonantsary mahaleo tena. “Niasa tao amin'ny departemanta misy ny sarimihetsika nataon'i Oliver Stone aho JFK. Tsy sarin'izy ireo ny sarin'ny filoham-pirenena Kennedy noho ny fivoaran'ny toe-javatra. Avy amin'ny asako tamin'ny tetikasa fanadihadiana isan-karazany, fantatro tsara hoe aiza no hahitako azy sy hanao kopia ao amin'ny National Archives. Nanasa ahy hiasa ho mpikaroka mpikaroka ao amin'ny departemantan'ny zavakanto amin'ny horonantsary manaraka i Oliver avy eo. Nixon. Ny mpanao endrika famokarana Victor Kempster dia sticker ho an'ny antsipirihany ary nianatra betsaka taminy aho. Saingy, eo am-piasana izany ary maro hafa lehibe Hollywood horonantsary, tsapako fa ny tantaran'ny 'tena olona' hitanay dia ireo no tena nankafiziko indrindra. Ny tsipika tantara ilaina dia mitovy. Saingy amin'ny maha talen'ny style doc ahy dia hitako fa ny tantaran'ny olona tena izy dia mety mahasarika toy ny tantara foronina fotsiny. ”
Nolazaiko tamin'i DeLouise fa, amin'ny maha-andevo amin'ny fahitalavitra mandritra ny androm-piainany, dia hitako fa fahita matetika kokoa ankehitriny ny mahita ny vehivavy isaina ho mpanoratra sy talen'ny fizarana tantara mitohy amin'ny fahitalavitra malaza, izay mamelombelona amin'ny indostria iray izay anjakan'ny lehilahy an-taonany maro, ary nangataka azy haneho hevitra momba io fironana io. “Betsaka amin'ireo mari-pamantarana sy mpamokatra hitanao fa vehivavy mpilalao sarimihetsika farany afaka mamatsy vola sy mamorona ny tantara tian'izy ireo hiseho. Ohatra, Kirsten Dunst amin'ny seho vaovao sy mahafinaritra Ahoana no ahatongavana ho Andriamanitra any Central Florida ho an'ny Showtime, na i Nicole Kidman sy ny Reese Witherspoon milentika mba hamoronana Big Little Lies ho an'ny HBO. Saingy ho an'ny vehivavy tsirairay amin'ny fahaizany afaka mamatsy vola ireo karazana tetikasa ireo dia misy an'arivony maro hafa miaraka amina sary mihetsika sy hevitra tian-dry zareo atao amin'ny teti-bolan'ny kiraro. Na eo aza ny ezaka lehibe toa ny Share the Screen at Sundance sy Meryl Streep's The Writer's Lab, mbola vitsy ny vehivavy mamorona tantara mahazo famatsiam-bola. Ary aza manomboka ahy raha ny momba ny vehivavy ao ambadiky ny fakantsary ho DP, ao amin'ny sampana fanamafisam-peo, gaffers, grips, DIT, injeniera ary mpamoron-kira. Ireo isa ireo dia ao anatin'ny isan-jaton'ny isa tokana. Azonao atao ny mahazo ny antsipiriany rehetra avy amin'ny Ivotoerana San Diego State ho an'ny fianarana ny vehivavy amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika. Ka eny, mbola lavitra ny lalan-kalehantsika. Ny vaovao tsara dia ny fakantsary sy ny NLE mora vidy vaovao ahafahan'ny olona rehetra te-hitahiry tantara haka ny fitaovana ary handeha hanao izany. ”
Miresaka vehivavy amin'ny filmmaking ny indostria dia nitarika lozika tamin'ny programa GalsNGear an'ny DeLouise. “Izaho no namorona #GALSNGEAR ho toy ny hetsika pop-up hanampiana ny vehivavy hisolo tena tsara ho mpandahateny amin'ny fihaonambe matihanina sy ny hetsika amin'ny indostria. Ireto ny sasany amin'ireo tambajotra sy tombontsoa lehibe indrindra amin'ny sehatry ny fiofanana eo amin'ny sehatra, ary ny olona avy amin'ny maha-lahy sy maha-vavy dia mila mahatsapa fa raisina sy anisan'izany. Nijery hatrany ny tontolon'ny lahy rehetra aho, na nahita ny tenako irery izay teo amin'ny tontonana, nefa fantatro kosa vehivavy maro izay manam-pahaizana amin'ny sehatry ny famokarana. Ka nanondro izay rehetra fantatro aho ary nanasa azy ireo hifanatona amin'ny fifandraisana, ary manana tamba-jotra talen'ny vehivavy izahay, mpanonta, DP, mpitantana ny trano, injeniera feo, mpanamboatra feo, vokatry manokana mpanakanto, anarana no anarany, izay afaka miteny sy mizara ny fahaizany. Nanomboka dimy taona lasa izay izahay Kat Show ary fahombiazana lehibe izany. Izahay dia mitety takelaka, hetsika amin'ny tambajotra, ary fitaovana momba ny fitaovana ary nahazo fanampiana avy amin'ireo orinasan'ny indostria lehibe toa ny Blackmagic Design, Adobe, Broadcast Beat, Fox Fury Lighting, Digital Anarchy ary Dell hanome anarana vitsivitsy. Nahazo fanohanana lehibe avy tamin'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny Women in Film & Video DC koa izahay, izay toko ato an-toerana. Ny tanjonay dia ny hahazoana antoka fa na iza na iza manana fihaonambe na hetsika matihanina dia be dia be ny vehivavy manatrika, ary betsaka ny vehivavy ambony eo amin'ny sehatry ny sehatry ny fitenenana. "
DeLouise dia hitarika fampisehoana roa, "Fananganana ny orinasanao mahaleo tena ho amin'ny ambaratonga manaraka" ary "Fanoratana ho an'ny horonantsary," amin'ity taona ity Kat Show New York. “Efa mpandahateny tao amin'ny Post | Production World aho tamin'ny Kat Show ho an'ny, oh, mety am-polo taona izao. Kat Show dia hetsika indostrialy voalohany, ary tsy ho taraiko izany. Tsy fotoana ifandraisana fotsiny io. Fotoana iray tena tsara hianarana manerana ireo faritra samihafa amin'ny indostria misy antsika. Hiresaka amin'ny Kat Show New York tamin'ny volana oktobra, ary tsy andriko ny hahitako ireo fitaovana sy arofan'asa vaovao efa nipoitra na dia hatramin'izay aza Kat Show lohataona lasa. Hampiantrano ny iray amin'ny anay koa aho #GALSNGEAR takelaka ao.
“Amin'ny maha olona manana orinasan-tserasera fampahalalana telo ahy dia fantatro fa tsy mora ny mitantana ny orinasanao manokana. Hizara ny fahaizako amin'ny sehatra telo lehibe aho: ny fananganana ny marikao, ny fitantanana ny volanao, ary ny fakana sary an-tsaina ny hoavinao. Ireo no lafin-javatra telo izay ilana mpanohana matetika ny mpiasa an-tsokosoko satria sahirana loatra izy ireo miasa ho an'ny mpanjifany. Ka izany dia fotoana iray hanokana fotoana ho an'ny tenany. Na efa niasa nandritra ny taona maro ianao ary nahatsapa fa tototry ny fivoarana amin'ny sehatra manaraka, na manangana orinasa tsy miankina fotsiny ianao, ny atrikasa ho ahy dia hanome lalana tena azonao ampiasaina amin'ny orinasao. ”
Nifarana ny resadresaka nifanaovana tamin'i DeLouise nilaza tamiko ny momba ny drafiny ho avy. “Faly aho fa hampivelatra traikefa amin'ny fomba tsy fantatra momba ny toetra amam-panahy izay natao ho an'ny fametrahana tranombakoka, miampy fampirantiana mandeha. Ity tetikasa ity dia manambady ny fitiavako haino aman-jery arisiva amin'ny fitiavako ny fitantarana tantara tsara. Vao avy nahavita nanoratra boky vaovao ho an'ny Focal Press aho, Feo sy tantara an-tsary amin'ny horonantsary tsy tantara an-tsary sy horonan-tsary, miaraka amin'ny namako sy ilay mpangaro mozika Cheryl Ottenritter. Efa eo am-pivarotana mialoha izany ary hivoaka amin'ny volana ambony. Tamin'ny herinandro lasa teo dia nitifitra fampianarana Mazava ho azy LinkedIn momba ny "Running Your Production Business" izay hivoaka tsy ho ela. Ary faly aho amin'ny famokarana ataoko miaraka amina mpanjifa orinasa multinasional mamoaka vokatra vaovao lehibe. Ka ny fahalavoana dia nanomboka tamin'ny fitaovana mahery, ary izany no tiako indrindra! ”
#GALSNGEAR 2015 2016 Kat Show 2016 Kat Show Job Fair 2016 Kat Show News 2019 Kat Show New York Amy DeLouise bitrate fampihenana Fampitana Beat Awards Fampitana Beat Magazine fampitana injeniera fampitana Engineering Fifanarahana ireo fahitalavitra Broadcasting Fifanarahana H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC Sarimihetsika JFK Kat 2015 Kat 2016 NAB16 nabshow Sarimihetsika nixon tabataba fampihenana Oliver Stone UHD / 4K / HD viarte Warsaw 2019-10-15
Previous: Ny rafitra maoderina an'ny FSR dia mametraka ny seho mandritra ny NECA 2019
Next: Manokatra ny haingam-pandeha haingam-pandeha OTT Platform MediaHQ Lite ny fampahalalam-baovao